बुद्धभूमिमा विदेशी लगानीको फाइदा कि बेफाइदा ? - AahaSanchar
Home आहा बिचार बुद्धभूमिमा विदेशी लगानीको फाइदा कि बेफाइदा ?
विश्व सम्पदा सूचीमा परेको बुद्ध भूमि लुम्बिनी नेपालीहरुको लागि गौरवमय धार्मिक स्थल हो । एक कोणबाट हेर्दा हामी नेपालीहरु भगवान जन्मेको देशका मान्छेहरु हौँ । प्रकृतिले हामीलाई अथाह उपहार पस्केको छ । प्रकृतिले दिएको उपहारलाई हाम्रो सुन्दर देशमा सजाएर राख्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कम्जोरी हो । थोरै समय मिलाएर दाङको घोराहीबाट बाइकमा लुम्बिनि भ्रमणमा गएँ । मेरो लागि लुम्बिनी भ्रमण पहिलो थियो । भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि कस्तो होला भनेर मनमा अनेक जिज्ञासाहरु उत्पन्न भएका थिए । करिब ४ घण्टाको मोटरसाइकल यात्रा पछि म लुम्बिनी पुगेँ । मैले बाटोमा जसरी सोचेको थिएँ त्यो भन्दा विलकुल फरक थियो लुम्बिनी । बुद्धका मन्दिरहरु टाढा टाढा थिए । बुद्धभूमिको क्षेत्रफल जेहास् प्रशस्थ रहेछ । ठूला ठूला गौतम बुद्धका मन्दिरहरु रहेछन् ।
केहि मन्दिरहरु अझै बन्दैछन् । केहि निमार्ण भए पनि रंगिन बाँकि छ । मैले सोचेको भन्दा सयौँ गुणा सुन्दर रहेछ लुम्बिनी । ठूला ठूला मन्दिर देख्दा मलाई त सुरुमा लाग्यो ‘नेपाल सरकारले लगानी त लुम्बिनीमापो गरेको रहेछ । त्यहाँको बोर्टीङ स्थल, बुद्धका सुन्दर मूर्तीहरु । ठाउँ ठाउँमा भएका प्रतिक्षालय, मन्दिर वरीपरी फूलिरहेका कमल फूल, सुन्दर फुलहरुले रंगिएका पार्कहरु, साच्चि असाध्यै राम्रो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ बुद्धभूमि लुम्बिनीको । संसारमा रहँदासम्म एक पटक जाँनै पर्ने ठाउँ छ लुम्बिनी । मोटरसाइकल एक ठाउँमा पार्किङ गरेर यसो एउटा मन्दिरको अबलोकन गरेर बाइर निस्कदैँ थिएँ एउटा अटोरिक्सा वाला दाईले भने ‘घुम्नको लागि जाने हो,कम्बोडिया, मेनमार, जर्मनी लगायत सबै ठाउँमा घुमाइदिन्छु ।’मैले त्यो दाईलाई जाँदिन दाई भनेर पठाइदिएँ ।’ पछि यसो सोचेँ ‘यो दाईले किन बिदेशी राष्ट्रको नाम लगेर घुमाईदिन्छु भन्छ भन्ने कुरा मनमा खेलिरह्यो । पछि बल्ल थाहा पाएँ बुद्धभूमि लुम्बिनीमा कसले ठूलो र सुन्दर हर्ने लाएक बुद्ध मन्दिर बनाउनलाई विदेशी राष्ट्रहरुको प्रतिस्र्पधा चलेको रहेछ । जुन देशले मन्दिर बनाएको छ त्यो देशले बनाएको मन्दिर स्वं आफ्नै देशले चिनिनेगरी नामाकरण गरेको रहेछ । त्यसैले त त्यो अटोरिक्सावाला दाईले कम्बोडिया,म्यानमार,जर्मन बन्दै नाम लिएको रहेछ । धेरै देशहरुले बुद्धभूमिमा लगानी गरेका रहेछन् । अझै केहिले गर्दैपनि रहेछन् । हिजो अस्ती भरर्खर चिनिया राष्टपति सि.जीफिङ नेपाल आएर गए ।
उनी आएपछि चिन र नेपाल बीचको सम्बन्ध अझै बलियो भएको भान भएको छ । सि.जिफिङको कुरा बुज्दा चीनको लागि लुम्बिनी चासोको विषय बनेको छ । अब चीनले पनि लुम्बिनीमा ठूलो लगानी गर्ने सम्भावना देखिन्छ । अहिले शान्तिका लागि जन्मिएका बुद्धिभूमिमा बिदेशीहरुले निमार्ण गरेका ठूला ठूला मन्दिरले हामीलाई केहि थोरै फाइदा भएको् महुसुस् त होला तर यसले कुनै दिन हाम्रो बुद्धमूमिको अस्तित्व नमेटिला भन्न पनि सकिदैन । विदेशीहरुको लगानीले विदेशी प्रर्यटकहरु नेपालमा भित्रियाउन सकिएला तर हाम्रो सन्देश विदेशमा राम्रो जाँदैन बरु हाम्रो देशमा जन्मिएका भगवान गौतम बुद्धको भन्दा जसले ठूलो र सुन्दर मन्दिर बनायो त्यसकै देशको सन्देश राम्रो जाने भयो । त्यसकै देशको प्रशंसा बढि हुने भयो । हामी पनि नेपालीहरुले लुम्बिनीमा गएर बुद्ध भगवानको प्रशंसा गर्नु भन्दा पनि ‘वा जर्मनले क्या खतरा मन्दिर बनाएको रहेछ, वा कोरियनले क्या ठूलो मन्दिर बनाएको रहेछ भन्ने मात्रै त हो । यसले के देखाउँछ भने गौतम बुद्धको अस्थित्व मेटाउँदै जाँन्छ विदेशीहरुले बनाएको मन्दिरको अस्तित्व बढ्दै जाँन्छ । भोली हाम्रो सन्ततीलाई विदेशीहरुको नामले चिनीने मन्दिरले भगुवान गौतमबुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेका हुन कि विदेशी राष्ट्रमा जन्मेका हुन भनेर चिन्न संका त लाग्दैन ? त्यसैले अबका दिनमा नेपाल सरकारले बुद्धभूमि लुम्बिनीमा नजर लगाउनु आवश्यक छ ।
अहिलेको अबस्थामा विदेशीहरुले लुम्बिनीलाई हेर्नेलायक बनाइदिएका छन् तर हाम्रो नेपाल सरकारले ती मन्दिरहरु हेर्नको लागि जान बाटो समेत राम्रोब नाईदिन सकेको छैन । विदेशीहरुसँग प्रतिस्पदा गर्न नसकेपनि नेपाल सरकारले बुद्धभूमिसम्म जाने बाटो सुन्दर बनाओस्, र त्यहाँका मन्दिरहरुसम्म जानको लागि बाटोहरु अझै सफा होस् । धुलो विहिन होस् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नजिकिदै छ तर त्यहाँको बाटोको अबस्था बेहाल छ । त्यसैले नेपाल सरकारले हाम्रो देशमा भगवान गौतम बुद्धको अस्तित्व जोगाई राख्नको लागि विभिन्न देशहरुले मन्दिर निमार्ण गर्दा नामकरणको उचित सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । जुन देशले मन्दिर बनायो त्यहि देशको नामले मन्दिर नचिनियोस् । मन्दिर त भगवान बुद्धको नामले चिनियोस् । यसप्रति नेपाल सरकारको चासो हुनै पर्छ नत्र भने भगवान बुद्धको अस्ति लुम्बिनीमा हराउँछ । विदेशीहरुलेब बनाएको मन्दिरहरुको अस्तित्व बढ्छ । यसले घाटा विदेशीहरुलाई गर्दैन हामी नेपालीहरुलाई नै गर्छ । विदेशीहरुले आफ्नो देशको इज्जेत राख्नको लागि लुम्बिनीमा लगानी गरेको देखियो । हामी बुद्ध जन्मेको ठाउँका मान्छेहरु टुलुटुलु हेरेको देखियो । त्यैले नेपाल सरकाले छिटो भन्दा छिटो बुद्धभूममा विदेशी मित्रराष्ट्रहरुको लगानी सम्बन्धमा गौतम बुद्धको अस्तित्व हरण नहुने गरी सम्झौता गरियोस् । सम्झौता मात्राले पनि पुग्दैन । देशको इज्जेत राख्नलाई हामी भगवान जन्मेका देशका मान्छे हौँ, लुम्बिनीमा अझै लगानी गरियोस् ।
Previous articleऔकात : ह्याँती गर्ने कुरा
Next articleकार्यक्रममा ६८ जनाले गरे रक्तदान
aahasanchar - July 20, 2018
आहा कबिता: मेरी आमा र तिम्रि आमा